सेलिब्रेटीकी सेलिब्रेटी शुष्मा महरा
नेपालकै नम्बर एक फेसियल हाउसको लोभलाग्दो सफलता
फोटो : सरोज बैजु
काठमाडौँः तपाई अनुहार सुन्दर पारेर आफूलाई राम्री बनाउन सक्नुहुन्छ ? तर त्यही अनुहारले सेलिब्रेटी बन्न सक्नुहुन्छ ? अहँ गाह्रो छ । काठमाडौँका चोक चोकमा अनुहार सुन्दर पार्ने पसल छन् । जसलाई ब्युटी पार्लर भनिन्छ ।
ब्युटीपार्लरभन्दा केही माथि उठेर अचेल फेसियल हाउसको संख्या पनि बढ्दो छ । जहाँ अनुहार, कपाल मात्रै होइन, एउटा मानिसलाई सेलिब्रेटी बनाउन सबथोक उपाय लगाइन्छ ।
तर सर्वसाधारण मानिसको अनुहार सुन्दर बनाउनेभन्दा सेलिब्रेटीको अनुहारमा चमक ल्याउने काम जोसूकैले गर्न सक्दैन् । त्यति मात्रै होइन, निकै महंगो फेसियल गर्ने सेलिब्रेटीका लागि अखडा नै निर्माण गर्नु झन् चुनौतिपूर्ण काम हो ।
काठमाडौँमा दुई दशकयता फेसियल हाउस चलाइरहेकी शुष्मा महराका लागि भने यो काम हिजोआज सामान्य हो । राजधानीको मुटु मानिने काठमाडौँ मलको चौथो तलामा फेसियल हाउस खोलेर राज गरिरहेकी शुष्मा सेलिब्रेटीकी पनि सेलिब्रेटी हुन् ।
यसको अर्थ नेपालका अधिकांश सेलिब्रेटी उनको फेसियल हाउसका ग्राहक हुन् । अनि उनीहरुको सुन्दरता चम्काउने गर्छिन्, शुष्मा । एकछिनलाई भनौँ, शुष्माले हरेक सेलिब्रेटीलाई सेलिब्रेटीको श्रेणीमा रहिरहन रातदिन मेहनत गरिरहेकी छिन् । सेलिब्रेटी भएर मात्रै हुदैन् ।
त्यसका लागि चाहिने सुन्दरता र पब्लिक फिगर निर्माण गरिदिने काम पनि शुष्माले गर्छिन् । आफ्नो कलाकार जीवनमा ठूलो संघर्ष गरेर माथि उठेका सेलिब्रेटी शुष्माका ग्राहक हुन् । यसलाई ग्राहक भन्दा एक स्टेप माथि उठेर भन्दा सेलिब्रेटीहरुको रोजाई शुष्मा हुन् ।
हरेक सेलिब्रेटी शुष्माकहाँ पुगेपछि आफूलाई सुन्दरताको राजमा निखारिएको पाउँछन् । अरुभन्दा स्मार्ट बनेको पाउँछन् । त्यति मात्रै होइन, आफ्नो कलाकारिताको जीवनमा थप सफलता चुम्ने र अझै धेरै कदम अगाडि बढ्ने आत्मविश्वास बढाउँछन् ।
यो शुष्माका लागि खुशीको कुरा हो । त्यति मात्रै होइन, उनीहरुलाई दिने सर्भिस शुष्माका लागि सफलता र अवसर दुवै हो । उनले दुई दशक यसरी हरेक दिन सेलिब्रेटीहरुको मन जित्दै गएकी छिन् । नायक भुवन केसी, शिव श्रेष्ठ, अनमोल केसी, प्रदीप खड्का लगायतका धेरै नायक शुष्माको फेसियल हाउसमा निरन्तर आइरहन्छन् ।
नायिका तथा मोडलहरु पनि उनको पसलमा त्यत्तिकै धाउँछन् । यसरी भन्दा उनको फेसियल हाउसमा नायक, नायिकादेखि मोडलसम्मको लर्को लाग्छ । त्यति मात्रै होइन, फिल्म निर्माता सन्तोष सेन, शोभित बस्नेत लगायतका निर्माता पनि उनको फेसियलमा हाउसमा पुग्छन् । मोडल शंकर बिसी, ज्योती मगर लगायतका थुप्रै कलाकार उनको पसलमा झुल्किरहेका हुन्छन् ।
यसकारण पनि शुष्मालाई सेलिब्रेटीकी पनि सेलिब्रेटी भनिन्छ । उनी हरेक सेलिब्रेटीलाई सुन्दर, आकर्षक र उसको फिल्मी करियरलाई उकास्न हरथोक प्रयास गर्छिन् । यो नै उनको शक्ति हो । सफलता हो । र कलाकारहरुको केन्द्रबिन्दु । जसलाई शुष्मा आफ्नो जीवनको गर्विलो अनुभूति भएको बताउँछिन् ।
‘सेलिब्रेटीहरुलाई उनीहरुको क्षमता र सफलता हेरेर फेसियल गर्नुपर्छ । यो सजिलो र सानो काम होइन । मैले दुई दशकयता उनीहरुलाई सेवा दिइरहेकी छु’ कर्णाली खबरसँग शुष्माले सारमा भनिन्, ‘सायद धेरैजसो सेलिब्रेटी मेरोमा आउने भएर होला, सेलिब्रेटीको पनि सेलिब्रेटी भन्छन् । यसमा गर्व लाग्छ ।’
प्रकाशित मिति: आइतवार, बैशाख १२, २०७८, ११:३३:१४
आफू पढेको स्कुलको नाम सगरमाथामा पुर्‍याउँदै जेनजेन
‘मानव अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ ...’
‘दाई मेरो घोडामा चढ्नु न.....’
नेपाली खानाको संग्रहालय बनाइँदै
शुक्रवार, बैशाख १०, २०७८ कर्णालीखबर
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान ( नाथम ) ले पर्यटन उद्योगमा सीपयुक्त दक्ष मानव संशाधन उत्पादन गर्ने अग्रणी संस्थाको परिचय बनाउन सफल भएको छ । पुरा पढ्नुहोस्
नलगाडमा दही जमाउने ठेकी कोर्दै
बिहिवार, बैशाख ९, २०७८ कर्णालीखबर
जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका, ५ लहँमा परम्परागत तरिकाले गाई, भैसीको दही जमाउनका लागि बनाउने काठको ठेकी कोर्दै । पुरा पढ्नुहोस्